Maalin: Janaayo 19, 2017
Hindiya Waxaa jira degsiimo noocan oo kale ah oo ku taal Calcutta oo aan qofku si fudud u fahmi karin xaaladda. Debosmita Das, sawir qaade Calcutan oo saxeexay taxanaha sawirrada cinwaankiisu yahay Life and Lines bu [More ...]
Metrooga mudnaanta Kocaeli: Wasiirka Difaaca Qaranka Fikri Işık, oo ku kulmay Kocaeli, wuxuu siiyay macluumaad ku saabsan maalgashiga. Wasiir Ik wuxuu cadeeyay in culeyska la siiyay gaadiid isla markaana ay wadaan howlo deg deg ah oo loogu tala galay Metro. qaran [More ...]
Ku xigeenka CHP Istanbul Sezgin Tanrıkulu wuxuu codsaday aflagaado afka ah iyo jir ahaaneed oo ku saabsan dhulka, hawada, badda iyo gaadiidka TCDD. Iibso tigidh si ay gabadheeda 9 sano jir ugu keento Istanbul [More ...]
Duqa Magaalada Antalya Dowlada Hoose Duqa Magaalada Menderes Türel ayaa sheegay in la soo gaba gabeynayo Khadka Sarısu-Tünektepe Cableway iyo in wajiga labaad ee Wadada Reer Galbeedka la furayo todobaadyo gudahood. La-tashiga AK Party Konyaaltı [More ...]
Xarunta loo yaqaan 'Samsun Logistic Village Center' waxay soo saari doontaa Dhaqaalaha Magaalada: Samsun, oo iyadu magac u sameysay awooddeeda wax soo saar iyo dhoofinta, waxay noqotay saadka caalamiga iyo gobolka. [More ...]
Tareen Speed ​​Project inay Dardar Gaadiidka: Turkey, galaya marxalad cusub in isgaarsiinta la technology tareen-xawaaraha sare ah oo kulmay in 2009, dadka waddanka ee ku noolaa ilaa 2023 sano ku dhow 18 in kala bar rail-xawaaraha sare ee gobolka [More ...]
Aabe-gabadh udhaxeeya TCDD
Tikidhada dhinac-dhinac-dhinac-Aabaha-sheegashada ah waxay sheeganayaan inaysan jirin qoraal TCDD Transportation Inc.: Wargeysyada iyo bogagga internetka qaarkood "ee ka soo horjeedda Islaamka ee ku-orodka degdegga ah ee gabadheeda aan dhinac iska fadhiyin" iyada oo cinwaanka warkan gebi ahaanba dhabta ah. [More ...]
Safarkii magaalada gudahiisa, ka fikirid iyo illowsiin ayaa gaadhay masraxa. Isticmaalayaasha Tram waxay illoobeen alaabo badan oo ay ka mid yihiin kuwa sanka lagu buufiyo ilaa sharaabaadyada, dharka ilaa insuliinta, jaakadaha iyo dharka Kayseri Metropolitan Municipation Inc. [More ...]
Tareenka Denizli wuxuu ku dhuftay gaariga heerka isugeynta: Markii darawalka gaariga uu arkay heerka marxaladda dambe, Soke-Denizli wuxuu ku dhacay tareenka rakaabka. Marka loo eego macluumaadka la helay, shilka, safafka 19.30 ee xaafadaha Sumerian 25. [More ...]
Maalgalinta Maalgalinta ee Mashruuca Qalabka Kabaha ee Alanya
Maalinta la taaban karo ee Alanya Castle Teleferic Project: Mashruuca Teleferic, oo ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan degmada Alanya, wuxuu gaadhay marxaladda shubka la taaban karo. Waxaa la aasaasey Nofeembar la soo dhaafay maantana qodobka ugu hooseeya ayaa la dhigi doonaa. a [More ...]
RayHaber 19.01.2017 Warbixinta Shirka
Shaqaale iyo Adeegga Kirada Gawaarida ayaa la Iibsan doonaa Agab Wagon ayaa la Iibsan doonaa (TÜLOMSAŞ) Nidaamka Jidadka Caadiga ah ee Nidaamka Kaabidda Dhameystirka Waa La Dhisi Doonaa Adeegga Kirada Gawaarida Waxaa La Helayaa Adeeg Nadiifin Waxaa Loo Qabanayaa Adeegga Amniga Khaaska ah [More ...]
Magacyada dekedaha waxaa lagu beddelay sharciyada Ukraine
Magacyada dekada waxaa lagu badalaa sharciga Ukraine: Sida ku xusan tilmaamaha uu bixiyay Wasiirka Kaabayaasha Yukreeniya Omelyan, magaca dekada iyo tasiilaadka tareemada ayaa la badalayaa marka loo eego sharciga nadiifinta shuuciga. Sharci dejinta ee shuuciga ah waxaa ku jira astaamo Soviet [More ...]
Mashruuca Nostalgic Tram ee Taksim 6 Bisha May ma Adeegi doono
Tilmaamaha Nostalgic Tram ee Taksim 6 Dayax Ma U Adeegi Doono: The tram nostalgic, oo noqday sumadda Taksim, ma awoodi doono inuu bixiyo adeeg ilaa wakhti sababtoo ah shaqooyinka cusboonaysiinta kaabayaasha. [More ...]
Degmooyinka xnumx.akıll Cities gaarsiisan shirka, inay ka qayb qaataan siyaasadda guud ee Magaaleynta, magaalooyinka smart by samaynta maalgelin la xiriira waxbarashada pilot ee Turkey, macluumaadka iyo wararka abuurayo, NGO Public Technology Platform [More ...]